RS တစ်ခုရဲ့ ပထမလမှာ သိသာထင်ရှားတဲ့ လက္ခဏာတွေတော့ မမြင်နိုင်သေးပေမယ့် သူ့ရဲ့ အပြုအမူတွေကို အာရုံစိုက်သတိထားကြည့်မယ်ဆိုရင် သူဟာ မျှော်လင့်ချက်ကင်းမဲ့နေသူတစ်ယောက် ဟုတ်မဟုတ်သိနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင်ဘဝမှာ ကျရှုံးခြင်းတွေအတွက် ဖြစ်နိုင်ခြေအရှိဆုံး၊ လူတိုင်းကြုံတွေ့ရတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုက မှားယွင်းတဲ့လက်တွဲဖော်ကို ရွေးချယ်မိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အမျိုးသားတစ်ယောက်ဟာ ခိုင်ခံ့ပြီး သာယာပျော်ရွှင်ဖို့ကောင်းတဲ့ မိသားစုကို ဖန်တီးနိုင်သူတစ်ယောက် ဟုတ်၊ မဟုတ်ဆိုတာ ဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ။
၁။ သူဟာ ပျင်းတယ်
သူဟာ ဘယ်အလုပ်ကိုမှ လုပ်ဖို့ မရွေးချယ်ဘဲ တာဝန်ဝတ္တရားတွေ အားလုံးကို သင့်အပေါ်ကို လွှဲချနေပါသလား? ဒါဟာ လုံးဝမနှစ်မြို့စရာအချက်ပါ။ သူဟာ ဘယ်တော့မှ ပြောင်းလဲလာမှာမဟုတ်ပါဘူး။
၂။ ကလေးတွေအပေါ် အမြင်တွေ ကွဲပြားနေလား
သင့်ရဲ့ ပါတနာဟာ ကလေးတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လိုအမြင်တွေရှိတယ်ဆိုတာ သိထားတာက သင့်အနာဂတ်မိသားစုအတွက် ပိုအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။ သူကလေးဘယ်နှစ်ယောက်ယူချင်တယ်ဆိုတာလည်း သိသင့်ပါတယ်။ သင်နဲ့ သူ့အကြားမှာ ပျော်ရွှင်သောမိသားစုတည်ဆောက်ခြင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကွဲပြားတဲ့အမြင်တွေရှိနေနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေမှာ အမြင်မတူတာဟာ ညှိနှိုင်းရတာ ပိုခက်ခဲတတ်ပါတယ်။
၃။ သူဟာ သူ့အမေနှင့် တစ်ခြားအမျိုးသမီးတွေရဲ့ မကောင်းကြောင်းတွေပြောတယ်
သူဟာ တစ်ခြားအမျိုးသမီးတွေ၊ သူ့ရဲ့အရင်ရည်းစားဟောင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လိုတွေပြောတတ်တယ်ဆိုတာ နားထောင်ပါ။ သင့်ရဲ့ ပါတနာဟာ ၎င်းတို့ကို ဆူပူတာတွေ၊ ရုတ်ရင်းကြမ်းတမ်းတဲ့စကားလုံးတွေ ပြောမယ်ဆိုရင် သင်ဟာ misogynist နဲ့ ပတ်သက်မိနေတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
၄။ သူဟာ အိမ်ထောင်သည်တစ်ယောက်
ဒီနေရာမှာ တကူးတကအကြောင်းပြချက်တွေရှိနေဖို့ မလိုအပ်ပါဘူး ။ အမျိုးသားတစ်ယောက်ဟာ သူ့ရဲ့ ဇနီးကို သစ္စာမရှိဘူးဆိုရင် သင့်ကို လက်ထပ်ပြီးချိန်မှာ ပြောင်းလဲသွားလိမ့်မယ်လို့ မမျှော်လင့်ပါနဲ့။
၅။ သူဟာ ကပ်စေးနှဲသူတစ်ယောက်
စားသောက်ဆိုင်တွေ၊ ရုပ်ရှင်တွေနှင့် တစ်ခြားနေရာတွေကို သွားလည်ကြတိုင်း အမြဲလိုလို သင့်အတွက် သင်ကိုယ်တိုင် ငွေပေးချေနေရသလား? သင့်လျော်တဲ့ အမျိုးသားတစ်ယောက်အတွက် တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်မျှတမှုရှိနေဖို့ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်ဟာ ခိုင်လုံတဲ့အကြောင်းပြချက်မဟုတ်ပါဘူး ။ ဒီလူဟာ တော်တော်စိတ်ပျက်ဖို့ကောင်းသူတစ်ယောက်ပါ။
၆။ သူမှာ သင်နဲ့ လုံးဝညှိမရနိုင်တဲ့ ကိစ္စတွေရှိနေသလား
သင်တို့ရဲ့ RS အစမှာ နားလည်မှုနဲ့ အပေးအယူတွေ မျှတမှုရှိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီလိုမဟုတ်ရင် RS သက်တမ်းကြာလာပြီး နောက်ပိုင်း အခွင့်အရေးတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ညှိနှိုင်းကြတိုင်း ပိုဆိုးရွားလာပြီး အငြင်းပွားမှုတွေကို ရှောင်နိုင်ဖို့ တော်တော်ကြိုးစားရပါလိမ့်မယ်။